Yiba Nomqhubi "Ngubani Ofuna Ukuba Yizigidi"
Nantsi indlela yokufumana ithuba lokuba ngumqhubi omkhulu
"Ngubani ofuna ukuba nguMillionaire" yi-quiz ecacileyo ebonisa ukuba uye wabona amaninzi amanqabileyo ehamba kunye nemali eyininzi yemali kwiminyaka. Emva kokubethwa kwexesha elikhulu kwixesha elibalaseleyo, umboniso ngoku ungumzuzu weeyure ozibonakalisa udlalwa ngumdlalo weChris Harrison .
Njengoko kuhlala kunjalo, kukho ezinye iimfuno zokufaneleka eziza kufuneka uzilandele ukuze uvumeleke ukuba ube kwisiboniso.
Kufuneka ube ngumhlali waseMelika
Kumele ube neminyaka eyi-18 okanye ngaphezulu
Akumele udlale kwisitulo esitshisiweyo ngexesha eliphambili okanye ingqungquthela yokubonisa
Abasebenzi, amalungu omtshato osondeleyo okanye abo bahlala kwindawo efanayo nabasebenzi banoma iyiphi nayiphi na inkampani ehambelana nomboniso ayinakufanelekela ukudlala (iinkampani ziquka iDisney, Row Embassy Row, Capital One kunye nawuphi na umthengisi)
Kufuneka uzimisele kwaye ukwazi ukuhamba waya eStamford, Connecticut, ngeendleko zakho zokubonisa ukubonisa
Ukufumana inkcazo epheleleyo yazo zonke iimfuno zokufaneleka, bona imigaqo esemthethweni.
Uza kufumana zonke iindlela ezahlukileyo zokuphicothwa kwintengiso engezantsi, kodwa kungakhathaliseki ukuba yintoni na indlela oyikhethayo uya kufuneka ube neenkcukacha ezilandelayo zokuchonga:
Ukufaka izicelo zeeThe Episodes
Ngamanye amaxesha "iMillionaire" ineeveki ezimbalwa zeeveki ezikhethekileyo, njengeveki ye-Movie okanye iVeki yoMtshato.
Hlola iwebhusayithi esemthethweni yemihla yokuphicothwa kwezi zinto. Ukususela kumboniso kuphela amateyipsi ukusuka ngoJulayi ukuya kuNovemba nangona kunjalo, la mabala awancipha.
Ukuphicothwa kweeveki ezisebenzayo kufana nokunye uvavanyo lweeMillionaire, ngokuqala ngokuvavanywa okubhaliweyo kunye nokugqitywa kwendlebe nodliwano-ndlebe. Ukuba uyamkelwa kwidiza elikhuphisanayo, uya kwaziswa ngeposi yeposi.
Iifowuni ezivulekileyo kunye noVavanyo lweeKomiti
"Ofuna Ukuba Yi-Millioneire" naye uqhuba iifowuni ezivulekileyo kwiindawo ezijikeleze ilizwe ukufumana abadlali. Ezi ziqhelekileyo zenzeka ngasekupheleni kwentwasahlobo / ekuqaleni kwehlobo, kwaye yonke imihla kunye neendawo zidweliswe kwiwebhusayithi yayo. Ukuba uceba ukuya kwelinye lale fowuni evulekile, ufike khona kusasa kuba umboniso awuqinisekisi ukuba bangaphi abantu abaza kuvavanywa kwindawo nganye.
Ngamanye amaxesha umdlalo ubonisa umdlalo "iqela", apho abantu ababini badlala umdlalo ndawonye. Kule meko, ukuphicothwa kwamatyala atyhulwa kwiwebhusayithi, kwaye amabini amalungu eqela kufuneka adlule ukuhlolwa okubhaliweyo kwaye udliwano-ndlebe kufuneka luqwalaselwe. Ukuba umntu oyedwa kuphela owenza ngempumelelo uphicotho-mpendulo, lowo mntu uya kufakwa kwiqonga elincinci lomdlalo ngamnye.
Ukuba awukwazi ukuyenza eNew York ekuphicothweni komntu kwaye akukho namakholi evuliwe ekuhlaleni yakho, ungazalisa ifomu yesicelo kwi-intanethi uze uyithumele ngekhonkco kwi-audited video ye-30 yesibili. ulayishe kwi-YouTube. Ezi ziindaba ezilungileyo kunoma ubani ovakalelwa kukuba unomdla kwi-audition kumntu.
Kwividiyo yakho, cacisa ngemizuzwana engama-30 kutheni ucinga ukuba unelungelo lokuba ngumdlali olandelayo "Ngubani ofuna ukuba nguMillionaire"?
Ayikwazanga kuba lula. Qinisekisa ukuba wenze umzamo wokubukeka ukhangelekile kwaye uthethe ngokucacileyo, kwaye uncumo kakhulu.
Ukuba uyenze kwiqonga elikhuphisanayo, uyavuyiswa. Ngoku kufuneka udlale umdlalo wokulinda ukuze ubone ukuba ukhethwa ukuba ube kwindawo. Ukuba ungowomntu onenhlanhla, uya kufowunelwa kwilungu lomsebenzi, kwaye le fowuni iya kubhalwa. Uyacelwa ukuba uqinisekise ulwazi kwifom yesicelo sakho sokuqala kwaye uqinisekise ukuba uhlangabezana nazo zonke iimfuno zokufaneleka. Emva koko uya kunikwa usuku lokubonakala kwakho okwenziweyo kwi-show.
Yintoni onokuyilindela kwi-'Dal or No Deal 'Ukufowuna umnxeba
Abafazi abaPhephayo beeNgxoxo zeNtetho
Umdlalo ongenakulibaleka Bonisa Iingcaphuno zokufumana
Dash Izibane: Ukukhanya kweBattery kwiDashboard yakho
Ukubhiyozela iSuku lokuzalwa sikaDkt. Seuss kunye neKlasi lakho
Indlela yokuyiqonda ukuba ngaba unzima
Ukuba Uthinta Iingqungquthela ze-Butterfly, Ngaba Usenokuqhubeka Uhamba?
I-Soap isebenza njani?
I-Harry Pace kunye ne-Black Swan Records
Ukuhlaziywa: iBridgestone Dueler H / P Sport AS
IYunivesithi yaseMontona yaseNtshona Koloni
Ukubhala Ngolwazi: Izihloko Ezilishumi zeeSampulu zokuThelekisa kunye neeNtsingiselo zokuPhatheka
Ukuqhubeka ngokuqhubekayo kunye neFom yeNxaxheba yeNtetho yeeLwimi
Iintsikelelo zoMtshato wamaHindu
'Ukuphuka Ubusuku' nguLiz Murray
I-Finlandia Admissions yeYunivesithi